Ny fahazoan-dàlana Merchandise Road Transport + 3.5 T manam-pahaizana amin'ny mpisolovava
LALANA FANDROSOANA FANAVOTANA
FAMPISOROANA NY FIVORIANA FIVORIANA FARANY NA TOKONY HAFA
Nandritra ny 10 taona mahery dia manome torohevitra sy miaraka amin'ny mpanjifany amin'ny dingana sy ny fahazoan-dàlana fahazoan-dàlana amin'ny Freight na Persons ny Fidulink mba hahafahan'izy ireo manokatra ny orinasany amin'ny fitaterana làlana. Fanohanana feno ao amin'ny lalàm-panorenana momba ny fahazoan-dàlana hahazoana fitateram-pitaterana an-dalamby na olona fa koa ao amin'ny lalàm-panorenan'ny orinasa ao aminy sy ireo any amin'ny sehatra mihoatra ny 56 eto amin'izao tontolo izao.
Serivisy fanamboarana sy fihodinana vita amin'ny vatosoa hanolotra serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Ekipa manam-pahaizana manokana momba ny sehatry ny fitaterana an-dalambe eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny traikefa ananantsika sy ny fitaovana ary ny vahaolana ahazoana ny fahazoan-dàlan'ny fitaterana làlana anao dia ho dingana tsotra ary tsy ho sakana intsony.
Miaraka amin'ny zavatra niainana toa anay, tsy afaka milaza aminao fotsiny izahay fa tsotra ny fahazoana ny fahazoan-dàlana hitaterana ny zotra na olona.
AN-TOKONY FAMPISORANA NY FIVAROTANA DIA AN-TOERANA
TENIN’NY FIVORIANA FARANY
FIDULINK manolotra fanampiana ho an'ny mpanjifany amin'ny fangatahan'izy ireo sy ny lalàm-panoratana ny rakitra fahazoan-dàlana amin'ny fitaterana lalana an-dalamby na olona. ny mpiasa FIDULINK manatanteraka ny lalàm-panoratana ny fangatahanao amin'ny fahazoan-dàlana mitondra ny làlan'ny Freight na olona.
Raha te hahazo vaovao misimisy momba ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny zotram-pitaterana Freight na People, alao amin'ny mpanolotsaina fotsiny. FIDULINK.
ATOROTY NY FIVAROTANAO NA NY TOERANA TRANSPORTATION ANY
SOCIETY ZAVATRA FARANY
Te-hamorona orinasam-pitaterana an-dalambe na mpitatitra mpandeha ve ianao? Makà zotram-pitaterana na fitaterana mpandeha.
Ny famoronana ny fivezivezena na ny orinasam-pitaterana mpandeha ao anatin'ny andro vitsivitsy dia azo atao miaraka amin'ny vahaolana amin'ny FIDULINK ny fametrahana ny orinasanao fitaterana an-dàlambe, ny lalàm-panorenan'ny rakitra fangatahana fahazoan-dàlana ary ny fombafomba fangatahana fahazoan-dàlana na làlana fitaterana an-dalambe, ny fampidirana banky, ny fametrahana fitaovana fandoavam-bola, ny fampiantranoana sy famoronana ny tranokalanao.